WAXYAABAHA IYO SIYAABAHA LOOLA DAGAALLAMO XAYAWAANKA CAYAYAANKA - GEEDKA ORCHARD
Mid ka mid ah cayayaanka ee plomme, taas oo ah balastarka ballaadhan balaadhan oo leh baalal caddaan. Qofka aan wali haysan waxaa loo aqoonsan karaa dhibaato la'aan. Jidhka lafdhabarta ee haweenku waa midab badanaa midab leh, waxaana lagu daboolay timo badan oo waaweyn. Dhabarku wuxuu ku buuxsamaa seddex madow iyo labo xayawaan bunni ah. Diirarka hibernate ee caleenta qalalan, iyo guga hore waxay bilaabaan cunaan cuno burooyinkoodii yar yar oo barara. Sidaa darteed, waxaa lagu burburiyey gebi ahaanba, iyo geedka lama beerayo.
Tallaabooyinka xakamaynta. Waxaa jira siyaabo badan oo lagu burburinayo haweeneyda, laakiin ugu fudud ee la wadaagaa waa uruurinta hareeraha jiilaalka iyo burburintooda soo socda. Hab kale oo wax ku ool ah oo lagu dagaalamo waa shimbiraha, kuwaas oo si fiican ugu caanbaxay goobtaada. Aroortii hore ee xagaaga, waxaad filin kartaa filim hoostiisa ka dibna si fiican u ruxi geedka. Maadaama miisaanka aan weli si buuxda u noqonin firfircoon, waxay si fudud u burburi doonaan laanta. Waxay u baahan yihiin in isla markiiba la isku daro oo la gubo.
Sida ugu dhakhsaha badan ee tubta bilaabay inay Bloom, waa in lagu buufiyo mid ka mid ah cayayaanka: Nitrafen, Metaphos ama Actellic.
Cayayaanka Tani waxaa si ballaaran loo qaybiyaa beeraha leh dhul aan kaarar lahayn. Dumarka ee aboorka jiilaalka waa cayayaanka weyn ee leh calool barar, lugaha dheer iyo garabka dillaacsan ee hoosta ka ah, sida haddii ay yaryar yihiin. Ma duuli karto, laakiin si deg deg ah ayay u socotaa laamaheeda iyagoo raadinaya meel ay ku dhajiso. Ragga ayaa duuli kara. Waxay leeyihiin baalalado bunni ah oo leh madow ciriiri ah iyo xididdada lafdhabarta ah. Jeexjeexka aboorka jiilaalka wuxuu gaaraa 3 cm dhererka, wuxuu leeyahay shan lammaane ah iyo madax madow. Goobta mugdiga ah waxay ku socotaa gadaasheeda dhabarka oo dhan jirka, iyo dhinaca dhinacyadu waxay leeyihiin saddex xariijimo cad. Magaca cayayaanku wuxuu si toos ah uga yimid dhaqdhaqaaqa gawaarida: waxay adkeyneysaa dhamaadka dibi ee madaxa, ka dibna daba-gala oo gurguurto.
Jiilaalka ukunta huruuda ah oo leh caleenta qoyan waxay ku dhacdaa dildilaaca gudaha cayayaanka u dhow kelyaha. Guga horraantii, xayawaankuna waxay qaniinaan oo qaniinaan kelyaha, iyagoo ka cunaya gudaha. Taas ka dib, waxay cunaan burooyinkeeda, ubaxyada iyo caleemaha, iyaga oo ku riixaya cantoobo. Bishii Juun, dhalashada xayawaanku waxay ku dhacdaa ciidda agagaarka geed ku dhow. Xilliga dayrta, marka tuberku ka baxo dayrta, dhicin ayaa soo baxaya. Dumarka ayaa ukumo ukumaha jiilaalka hoostiisa. Waxaa lagu qaban karaa kooxo ama shakhsi ahaan.
Tallaabooyinka xakamaynta. Xilliga dayrta, ka hor intaan caleenta soo muuqan, waxaad u baahan tahay inaad ku rido suunka suunka gaar ah oo laga sameeyay waraaqo deyman. Cayayaanka waa la burburiyaa suunka. Sidoo kale, ka dib markii buro jabaan, geedaha waxaa lagu daaweyn karaa infusions ee geedo gaar ah. Marka cimiladu ay tahay mid diiran, daaweynta dhirta Bitoxibacillin iyo Lepidocide waxay ka caawisaa xilliga nasashada.
Ma taqaanaa? "Guriga "waa noocyada ugu caansan adduunka ee adduunka, geedku wuxuu koraa 12 mitir oo dhererkiisu sarreeyaa wuxuuna leeyahay taajajir ballaadhan.
Ticks waa caleemo aan la garanayn oo beertid ah oo loogu talagalay beeraleyda iyo beeraha intooda badan. Ma aha mid ka mid ah fasalka cayayaanka, sidaa darteed, dooranaya alaabta ilaalinta dhirta, hubi inaad tixgeliso xaqiiqda. Ticks waa mid ka mid ah wakiillada ugu caansan ee noolaha ee ku jira noolaha. Ilaa hadda, waxaa jira in ka badan 50,000 nooc.
Cayayaanka cas cas
Waa shey kiimiko ah oo leh cabbir 0.5mm oo midab casaan leh. Dumarka dhedigga ah waxay ku dhajin karaan ilaa boqol jinsi noloshooda. Inta lagu jiro xilliga kuleylaha, saxeexyada guduudan waxay soo saari kartaa ilaa siddeed jiil oo carruur ah. Geedka ukunta xagaaga wuxuu ku dhacaa xididdada caleenta ee ka soo baxa dhinaca dambe. Dhammaadka dhedigga dayrta waxay dhigaan ukunta caleemaha yar yar. Ukunta jiilaalka waxaa loo wareejiyaa dusha sare ee jilicsan. Ka dib markii hibernation ka hor ubax, plomme ka soo ukunta dillaacaan dirxiga, kaas oo, maraya marxaladda of nymph, noqdaan shakhsiyaad qaangaar ah. Toddobaad ka dib, shillinta ayaa diyaar u ah inay jilaan.
Caarada miro casu waxay nuugaan casiirka ka soo caleemaha, ka dib markii ay qallajiyaan oo ay dhacaan. Miraha yaryar oo ha korinina cabbirka loo baahan yahay. Haddii infekshanka uu noqdo mid aad u ballaaran, markaa waxaad lumi kartaa ilaa 30% wadarta wadarta ugxanta.
Tallaabooyinka xakamaynta. Si loola dagaallamo waxyaalahan, diyaarinta pyrethroid kuma haboona. Waqtiga duurjoogta, cayayaanka soo socda ayaa loo isticmaalaa: "Fufanon", "Danadim", "Fitoverm" iyo kuwo kale. Marka infekshanku uu gaaro heer muhiim ah, markaa waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo daroogooyinka sare loogu talagalay: "Sunmite", "Neoron", "Nissoran", "Apollo" iyo kuwo kale.
Miraayad caan ah
Tani waa aaladda polymorphic taas oo dhaawici karta warshad ku taalla dhul furan oo furan. Cabbir ahaan wuxuu gaari karaa 0.6 mm. Xilliga xagaaga, midabka cayayaanka waa mid cagaaran-jaale ah, guga wuxuu noqonayaa casaan-casaan. Nafaqada iyo dhaliddu waxay ku dhacdaa dhinaca hoose ee caleemaha hoostiisa oo ah hoostiisa dhar khafiif ah. On dhaqdhaqaaqiisa, halkaas ayuu ku dhuumanayaa.
Marka jabaqda caarada caaradu ay noqoto mid aad u ballaadhan, webku waa la jiidi karaa xitaa inta u dhexeysa laanta geedaha ee dhow. Xitaa si buuxda ayaa loogu dabooli karaa kabaha. Talooyinka caleemaha oo ka baxaya raasamaal of mass mobilada ah ee cayayaanka la sameeyay. Dhaqdhaqaaqa caarada caarada waxaa lagu ogaan karaa dhibco madow oo ka mid ah xajmiga jirka.
Xilliyada kowaad, waxyeelladu waxay dhacdaa dhammaan caleemaha, ka dib markii ay cayayaanka cayayaanka u kaca sare iyo dhaawaca ma aha oo kaliya caleemaha, laakiin sidoo kale ubax leh miraha.
Hababka halganka. Inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, tubta waa in lagu buufiyaa "Aktellik", "Altyn", "Antikleschom" iyo diyaar garow isku mid ah. Haddii aad dib u dhacdo daaweynta, dheddiguhu waxay yeelan doonaan waqti ay ukeenayaan ukumo cusub ayna kordhiyaan tiradooda. Daawooyinka nooc kasta waa in la sameeyaa isla markiiba ka dib marka la ogaado dadka caarada caarada. Webka saxda ah ayaa leh hanti biyaha lagu celiyo. Daaweynta dambe waa la fulin doonaa, way adkaan doontaa in lagu gaaro natiijooyin wax ku ool ah xataa xitaa qiyaasta daawada sare.
Cayayaankaasi waxay ku dhaawacmeen geedo gaar ah oo adag. Jidhka dumarka qaangaarka ahi waxay leeyihiin midab guduudan oo casaan ah. Dhererkoodu waa 6 mm oo ballaadhankiisu waa 5 mm. Jidhka yar yar ayaa la wareegayaa oval, geesaha waa u naxariis badan. Ragga waxay leeyihiin jidh iyo khafiif ah. Madaxoodu waa madow oo leh lix indhood, antenna iyo lugaha ayaa ah jaale, caloosha iyo xabadka ayaa leh bunal iyo daboolay wax cad oo budada ah. On caloosha waa laba wakhti dheer.
Geedaha si aad ah ayaa loo wiiqay ka dib markii ay ka soo baxeen qashinka acacia sababtoo ah waxay nuugaan dhammaan nafaqooyinka oo ay ku dhuftaan unugyada dhirta candhuufta sunta ah. Dabadeedna, jilifka geedku waa la burburiyaa oo wuxuu u dhintaa qoryaha. Geedaha cuno by shading, lumiyo ma aha oo kaliya soo jiidashada muuqaalka, laakiin sidoo kale dhadhanka. Dhirta da'yarta, oo aan wax tallaabo ah loo qaadin si loo baabi'iyo cayayaanku, waxay u dhintaan laba sano gudahood.
Tallaabooyinka xakamaynta. Hubi geedo marka la beeri karo, maxaa yeelay gawaarida xayawaanka ah ee loo yaqaan 'acacia' ayaa loo qaybiyaa geedo iyo qalabka wax lagu cuno. Gogol nadiif ah ka soo cayayaanka dhintay iyo ka saar laamaha qalalan. Haddii kiisku aad u dayacan yahay, ka dibna geedka waa in la rujiyaa oo la gubaa. Cayayaanka cayayaanka ee plomme by ku xoqin waxaa lagu fuliyaa muddadii aamusnaan ilaa buro jebin. Wax-soo-saaridda waa in lagu sameeyaa sunta cayayaanka iyo daawooyinka loo isticmaalo ee ku salaysan saliidda macdanta.
Waa muhiim! Waa in si taxaddar leh loo sameeyaa, waa in la dhaqaa lafaha qalafsan iyo asliga, sababtoo ah waxay si buuxda u dabooli karaan gabbaadyada yar ee dulin.
Dib-u-daaweynta cayayaanka lagu sameeyay xilliga dib-u-dejinta ee dirxiga. Waxa kale oo aad ka kabi kartaa daaweynta noocyada kale ee cayayaanka.
Kuwani waa dhicin yar oo leh wingspan ilaa 25 mm. Roobka cawska ee cawska ayaa cunaya caleenta, taas oo ka dhalatay taas oo ay burburto, soo iibsato qaab aan caadi ahayn. Siciradu waxay koraan illaa 20 mm, midabkoodu wuxuu ku kala duwanaan karaa cagaar si buni ah.
Tallaabooyinka xakamaynta. Waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo burburinta waraaqaha ka hor inta aan la daabicin ubaxyada. Haddii qaboobaha jiilaalka inta badan ku nool yihiin geedaha, ka dibna lagu buufiyo sunta cayayaanka waa in lagu fuliyaa marxaladda gaduudan. Haddii adhijiradu maraan marxaladda ukunta, daaweynta waa in lagu sameeyaa guga heerkul aan ka yarayn 10 ° C. Way sahlan tahay in la helo jidadka, sababtoo ah cimilada qaboobaha, waxay ku dhuuban yihiin hoosteeda ama caleemaha cagaaran.
Waa muhiim! Cabbiraadda dhirta laga bilaabo qoyaanka cawska ayaa yeelan doonta saameyn aad u yar. Intaa waxaa dheer, dhammaan cayayaanka faa'iido leh iyo caarada yaryar ayaa sidoo kale ku xanuunsanaya sunta cayayaanka.
Ka hor inta aan la bilaabin ubax, daaweynta waxaa ugu wanaagsan in lagu sameeyo cayayaanka soo socda: "Atom", "Ditoks", "Di-68", "Binom", "Bi-58 New", "Rogor-S", "Terradim", "Landing", "Tagore", "Tod", "Zolon" , "Fufanon". Waxaad isticmaali kartaa daawooyinka "Avant", "Lannat 20 L", "Aktelli", "Calypso", "Sumition", "Samurai Super", "Sumidge", "Coragen" iyo kuwo kale.
Haddii rinjiyayaashu hore u dhaceen burooyinkeeda ubax iyo caleemo cagaaran, ka dibna waxaa la joogaa waqtigii loo soo bandhigi lahaa pyrethroids, tusaale ahaan, Ivanhoe, AltAlf, Accord, Alfatsin, Alfashans, Tsi-Alpha, Fatrin, Fastak. Daroogooyinka soo socda ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa: Karate Zeon, Altyn, Lambda-S, Kungfu, Break, Sensei, Gladiator, Karachar, Samum, Lyambdeks.
Waa muhiim! Xasuuso in pyrethroids dhaqaajiyo dhalmada. Iyo xagaaga at heerkul ah 25 ° C, waxtarkooda waxaa ku dhowaadaa wax yar.
Xilliga xagaaga iyo ubax ka dib, waxay ka fiicantahay inaanad isticmaalin sunta cayayaanka oo leh qulqul sarreeya sunta. Waxaa wanaagsan inaad isticmaasho mukhaadaraadka ku salaysan qaybta bakteeriyada, tusaale ahaan, Fitoverm iyo Akarin.
Kuwani waa cayayaanka qashinka ah, kuwaas oo ku tarma waqtiyo iyo tiro badan. Quburada ayaa burburiya dalagyo badan iyo dhirta dhirtu ka kooban tahay, oo ay ku jiraan plomme.
Qaadir sawir leh madow
Cayayaanka qaangaarka ahi waa mid madow oo madow ilaa 0.5 cm oo dherer ah jilbaha jaalaha ah iyo baalashyo hufan. Dirxiga ee sawfly madow ah waa cagaaran-cad oo leh madax madow iyo labaatan lugood. Waxay qabtaan xilliga qaboobaha ee ciidda si qoto dheer ah 10 cm, guga way dhalaan. Shakhsiyaadka qaangaarka ah waxay u muuqdaan usbuuc ka hor intaan caleemaha la gelin, oo marka hore ay ukumo ku darsadaan. Hal dumar ah ayaa ku noolaan karta ilaa 30 buro. Dildilaha dirxiga inta lagu jiro abuuritaanka ugxan-miro. Waxay cunaan iyaga oo ka cararaya abuurka. Dhallin kasta wuxuu dhaawici karaa ilaa lix miro bishii. Wintering dirxiga u tagaan dhulka ku dhow geedaha.
Badiyaa badi ayaa la ogaan karaa inta lagu jiro mudada diiran ee diiran. Cunto leh miraha dirxiga waxay bilaabaan inay u burburiyaan guga dambe - xagaaga hore. Haddii tirada cayayaanka ay gaaraan dhibic muhiim ah, markaa malaxdu waxay lumi kartaa ilaa 95% waxsoosaarkooda. Calaamad kale oo ka mid ah waxyeelada boodhka ee sawfly madow waa dalool wareeg ah oo miro ah, kaas oo taas oo mugdi madow ah iyo boodh lagu daro urka sigaarka ee qashinka lagu arki karo.
Tallaabooyinka xakamaynta. Sawir yar oo sawfly ah ayaa ka dhinta "Intavira" iyo "Iskra". Waxaa ku filan in lagu buufiyo tayada dhirta ee qaybta hal kiniin ah baaldi biyo ah. Miraha khasaare waa in la ruxruxaa oo la burburiyaa cayayaanka gudaha ku jira. Xilliga dayrta waxaad u baahan tahay inaad qodo carrada hoostiisa.
Ma taqaanaa? Ingiriisi Queen Elizabeth II maalin kasta waxay u cuntaa laba malab oo calool madhan, ka dibna waxay quraacdaa. Waxay cuntaa oo keliya miraha ka baxa beerta boqortooyada. Tani waa noocyo kala duwan oo leh magaca sharafta leh "Brompkon".
Dhuxul dhagax jaale ah
Kuwani waa cayayaanka nus-cayayaanka ah. Dadka qaangaarka ah waxay ku nool yihiin meelo cagaar ah oo ku yaal caleenta geedeedka. Goobta waxaa laga helaa dhulka hoostiisa hoostiisa. Waxay u yihiin halis sida qabiilka madow. Tirakoobku wuxuu sheegayaa in hal jaale ah oo jaale ah uu awood u leeyahay in uu ku dhaco ilaa lix miro oo noloshiisa ah. Weerarka weyn ee cayayaanka ayaa burburin kara ilaa 80% dalagga dalagga. Waxaa intaa dheer, kaliya geedaha ugu fiican ayaa la saameeyaa.
Tallaabooyinka xakamaynta. Cabbitaannada geedaha waa in lagu sameeyaa meelo laga soo galo goobahaas oo ah meesha ay ku badan tahay cayayaanka. Daawada ugu fiican ee sawfly huruud ah waa Metaphos. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa boqolkiiba toban "karbofos" iyo benzophosphate. Boorashka kowaad ee cayayaanka ka soo horjeeda cayayaanka waxaa la sameeyaa dhowr maalmood ka hor bilowga bilowga. Si fiican ula qabso hawlaha "Rogor", "Gardona", "Tsidial." Qodobka soo noqnoqda ee xayawaanka ka soo cayayaanka ayaa loogu talagalay burburinta dirxiga marka tufaaxu hore u burburay. Meesho lagu taliyey in la isticmaalo - "Tarzan", "Insegar", "Novaktion".
Daaweynta saddexaad ayaa lagu dabaqay "Metaphos" ama "Phosphamide". Waxaa lagama maarmaan ah in la xisaabiyo daaweynta habkan oo kale in beergooyinku la qabsoomo bilaa bil ka dib burburinta cayayaanka.
Ma taqaanaa? Ku xigta xajmiga laguma beeri karo tubaakada, baradhada, yaanyada, ukunta iyo habeenkii kale, sida ay ku dhiriyaan jeermiska fungal.
Cayayaankaan wuxuu saameynayaa ma aha oo kaliya tubta, laakiin sidoo kale dhaqamada kale ee miro-dhalinta, oo ah cayayaanka badan ee wax cunaya. Si ka duwan noocyada kale, dulin yar oo la ogaan karo, waxay rinjiyeyaashu gaadhi doonaan dherer ahaan siddeed mitir. Muuqaal muuqaal ah waa nooc ka mid ah burooyinka oo ku yaal dhabarka cayayaanka. Nibbles aboorka caleemaha ayaa caleemo saaran. Ukunta waxaa lagu dhajiyaa laanta qalfoofka iyo derbiyada dhismayaasha guryaha.
Tallaabooyinka xakamaynta. Si taxaddar leh u fiiri meesha loogu talagalay ee wadooyinka iyo ka saarida xakameynta ukunta leh mindi. Ka hor iyo ka dib ubax, tubta waa in lagu daaweeyaa Inta-Vir.
Midhaha dufanka leh ee dhirta xayawaanka ayaa si cad u muujinaya in ay waxyeeleeyeen cayayaankan. Kabuubka qaangaarka ee qaangaarka ah waa balastar, oo dhaqdhaqaaqa burburku yimaado dhammaadka Abriil. Waxay caadi ahaan qoyaan fiidkii + 16 ° C Gawaarida xayawaanka waxay ku xidhan yihiin miraha si ay u noqdaan cunto iyo guriga. Kaararka noocan oo kale ah ayaa baaba'aya xitaa ka hor inta ay Bisaylkiisa buuxa. Plums, aboor ku cunay, daboolay qadar yar oo xanjo ah.
Hababka halganka. First of dhan, miraha dhacday ayaa la soo ururiyey, godad dabiiciga ah ayaa lagu dabaqaa iyo ciidda waxaa lagu qoday agagaarka geedaha. Hawlgalka waxaa lagu sameeyaa "Aktar" iyo "Confidor". Waxa kale oo ay mudan tahay in la tilmaamo astaamaha noocan ah sida Bitoxibacillin ama Lepidotsid. Waxaad sidoo kale shakhsi ahaan u diyaarin kartaa decoction qadhaadh qadhaadh.
Tani waa beertii beerta iyo beertii beerta ku jirta oo ku jirta suufka unugyada dhirta. Sidaa daraadeed dhaawac aan loo baahnayn oo loo gooyey dhirta ayaa la sameeyaa: koritaankiisa iyo horumarkiisa waa la joojiyaa, ubaxu wuu dhacaa, tayada miraha sii xumaato. Tani, aphid marna ku dhacay jacayl leh bannaanka u, kuwaas oo si joogto ah raadinaya hababka ugu wax ku oolka ah ee wax ka qaban.
Luujin karaa aphid
Cayayaankaani waxay saameyn ku yeelan kartaa gebi ahaanba geedka. Ka dib qaybta hoose ee caleenta ayaa waxyeello soo gaadhay, way burburtay ka dibna si dhakhso ah ayey u engegaysaa. Sida miraha, waxay jilicsan yihiin, kallanaayeen iyo dhacaan. Laamaha geedaha way qallalan yihiin, geedka oo dhanna wuu daciifiyaa. Intaa waxaa dheer, dheecaanka jidhka oo qarsoodi ah by aphids, ka qaybqaataa soo bax iyo horumarinta fungus soot.
Tallaabooyinka xakamaynta. Ka hor inta aanad bilaabin inaad la dagaallanto cayayaanka xayawaanka, tiro tallaal oo ka hortag ah waa in la qaato guga. First of dhan, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro oo dhan caleemaha dhalinyarada sameeyay hareeraha xididada. Sidoo kale bisha Maarso waxaad u baahan tahay inaad ku buufiso dhirta tubta leh Nitrafen. Marka burooyinkeeda la kala diro, waa in lagu daaweeyaa tincture of tubaakada, oo ay weheliyaan saabuunta saabuunta. Goobta lafteeda iyo laanta caleenta ah ayaa u baahan in la gashado jeexa cayayaanka.
Dumarka ka mid ah cayayaanka waxay gaartaa dherer ilaa 2.5 mm oo ay leeyihiin jir huruud ah oo jilicsan. Dhinacyada iyo caloolnadu waa cadad madow. Indhaha cayayaanka ayaa ah casaan-bunni. Dirxiga ayaa leh midab roog ah.
Tallaabooyinka xakamaynta. Inta lagu jiro mudada marka caleenta ay leedahay celcelis ahaan 10 aphids, waxaad isticmaali kartaa Bitoxibacillin. Ka ilaalinta plomme ka soo cayayaanka leh qalab this hortagtaa muuqaalka of ma aha oo kaliya aphids, laakiin sidoo kale scoop multi-tiir iyo baal mareeno. Habka wanaagsan - "Bi-58", "Karate", "Siren" iyo "Dursban".
Waa muhiim! Ka dib markii ubax, ubucda cayayaanka waxay kordhisaa 300%. Sidaa darteed ha illoobin tallaabooyinka ka hortagga.
Tani waa cayayaan madow oo leh cayayaanka jaalaha ah. Dhirku wuxuu gaadhaa dhererka centimitirka. Dumarka waxay dhigtaa ukumaheeda gudaha miro boogta ah oo aan wali lahayn. Iyo in plomme in horey u dhacday, jiilaalka ee dirxiga dhacdaa. Geedka dhuxul-geedeedka ayaa dhirta ku dhuftay dhirta badhtamihii xagaaga waxaa jira dhacdo weyn oo ah miraha.
Hababka halganka. Miraha khatarta ah waa in la goosto oo lagu aasay si qoto dheer ah ugu yaraan nus mitir. После начала пиковой активности вредителя нужно опрыскать деревья инсектицидным средством "Инсегар". Это происходит через декаду после цветения растения.
Ma taqaanaa? Слива в Китае - символ зимы. Shan dabeecadood oo ubax ah ayaa calaamad u ah nabadda, farxad, nasiib, fogaan iyo barwaaqo.
May Mayer Hrusch
Dirxiga ee cayayaankan polymorphid ku dhacaa xididdada geedaha dhalada yar. Shakhsiyaadka qaangaarka ah waa kuwa lamid ah oo waaweyn, gaaraya ilaa saddex sintimitir oo cabbirka. Elytras waa midab madow ah oo madow oo leh madow. On caloosha waxaa jira qoryaha la isugu xiro, kaas oo ah mid aad u dheer iyo hoos u dhaco. Tirada badan, Mayr Khrushchev waa mid halis u ah qaabka dadka waaweyn iyo qaabka dirxiga. Dhirta yaryar, oo ay waxyeelo soo gaartey, u engegay, si tartiib ah ayey u socotaa oo u dhinta. Shakhsiyaadka qaangaarka ah waxay ku gartaan caleemaha geedaha.
Tallaabooyinka xakamaynta. Habka ugu fudud ee lagu baabi'in karo dirxiga Khrushchev waa ururinta buugaagta iyo burburinta kale. Iyada oo dhalmo badan oo ka mid ah kuwa lamid ah May, waxaad ruxin kartaa filimka, ku faafay hoos taajkii geed, iyo burburin. Tani waa in la sameeyaa subaxa hore, halka kuwa lamid ah ay wali ku jiraan xaalad jilicsan.
Tallaabooyinka ka hortagga cayayaanka
Xaqiiqada aan la goyn karin ee dhirta xooggan oo caafimaad leh ayaa ka soo kabanaya saameynta waxyeellada cayayaanka marka loo eego kuwa liita. Sidaa darteed gabagabada ah in aynaan si dhakhso ah u qaadin "garaacis culus", soo saarista warshadda si ay u walwaliso, laakiin xoojiyaan. Guryaha agrotechnik sare waxay gacan ka geystaan ​​kobcinta aad u fiican iyo horumarinta geedaha oo keliya, laakiin sidoo kale geedaha kale.
Ugu horreyn, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo khatarta ah in lagu faafiyo dhirta ka hor inta aan la beerin dhulka. Tani, geedo waa in la iibsadaa kaliya ee guryaha xanaanada iyo dukaamada. Waxaa muhiim ah in la helo noocyo udub dhexaad u ah dhibaatooyinka halista ah ee cayayaanka ka jira degaankaaga. Waxay kordhisaa caabbinta dhirta si ay cayayaanka uga dhigaan halbeeg gaar ah iyo fiirsashada nafaqooyinka. Bacriminta borotiinka-fosfooraska ayaa si fiican u habboon, laakiin xad-dhaafka ah walxaha nitrogenous, lid ku ah, waxay yareynaysaa difaaca geedaha waxayna yareysaa nolosha shelf ee miraha la goostay. Bacriminta dabiiciga ah waxay kaloo hagaajiyaan xaaladaha nololeed ee cayayaanka ku nool carrada.
Beeraha ku wareegsan geedaha guga, oo ay weheliso codsi simensane ah ee Bacriminta ku kordhiyaan ilaalinta ka soo horjeeda cayayaanka kala duwan. Qulqulka carrada, waxaad ka hortagtaa inaad u gudubto dulinka qaboojinta ee jiilaalka.
Gooyo iyo sameynta taajaha geedku waxay ku lug leedahay ka saarista cayayaanka saameeya caleemaha, caleemaha iyo laamaha iyaga oo ka saarista kaddib. Tani waa tallaabad aad u tii ugu fiicnayd ee dib u soo noolaato geedka waxayna siisaa awood iyo caafimaad. Iyadoo wadajir ah la gooyaa, waxaad ka saari kartaa lakabka of jilif hore. Iyadoo la socota, cayayaanka duuban ee ku nool degaanka ayaa sidoo kale la burburin karaa.
Laakiin waxaa jira su "aal macquul ah oo ku saabsan isticmaalka daroogada ee cudurada. Dhammaan qaababka kor ku xusan waxay si cad uga xun yihiin waxtarkooda wax qabadkooda kiimikada. Xaaladdan oo kale, ha ka baqin inaad isticmaasho daawooyinka loo yaqaan 'prophylactic drugs' oo loogu talagalay nooc ka mid ah cayayaanka.
Waa muhiim! Waa inaadan ku dhaafin isticmaalka kiimikada ka soo horjeeda cayayaanka, gaar ahaan haddii aan lagu arag geedkii. Gaar ahaan, haddii sannadkii hore beerta ayaa sidoo kale caafimaad leh. Waxay noqon doontaa mid aad u macquul ah in lagu hogaamiyo fikradaha "ha ahaato xaalad kaliya."
Sannad kasta waxaa jira daroogo lagu badalayo jihada nabadgelyada iyo badbaadada. Laakiin ha ilaawin in mar walba la xaqiijiyo walxaha kantaroolka cayayaanka. Geedaha waa in sidoo kale lagu daaweeyaa taxadar leh diyaar garow, inkastoo ay wax ku ool yihiin, laakiin maaddooyinka aadka u sareysa ee waxyeello u leh dadka. Kuwaas waxaa ka mid ah Nitrafen, Karbofos iyo Polycarbacin.